🥇 ▷ Hadda Pixel 4 uma baahna wax kale: xaqiijinno badan, muunado sawirro ah iyo sidoo kale 2 gacmood oo ku saabsan fiidiyowyo tayo sare leh! (Sawir iyo muuqaal) ✅
Hadda Pixel 4 uma baahna wax kale: xaqiijinno badan, muunado sawirro ah iyo sidoo kale 2 gacmood oo ku saabsan fiidiyowyo tayo sare leh! (Sawir iyo muuqaal)
Miyaad ka daashay Google Pixel 4? Wali lama soo bandhigin (oo wali waa ka badan tahay bil wax ka badan), laakiin hadda waxaan si caadi ah u ognahay wax walba oo isaga ku saabsan. Laakiin maanta waxay u muuqataa in dunidu diiradda saareyso isaga, maxaa yeelay waxaan haysannaa dad badan, badan oo galayaal cusub ah: qaar baa xaqiijiya wixii aan horey u ogayn, qaar kalena wax cusub ayey ku daraan.
Aynu ku bilowno midka koowaad: isticmaaleha Twitter Zyad Atef ayaa xaqiijiyay faahfaahinta farsamada ee Pixel 4 XL oo na siinaya laba sawir oo dhab ah: Snapdragon 855, 6 GB oo ah LPDDR4 RAM, muujiye QHD at 90Hz AMOLED waa Wejiga furitaanka 3D (sidaas oo loo xaqiijinayo la’aanta akhristaha faraha).
Kadib liqitaan ayaa ka yimid Shiinaha Pixel 4 XL awoodda bateriga: 3,700 mAh, oo ah qiime laga yaabo inaanu aad u sarreeyn marka loo eego cabbirrada “deeqsinimada leh” ee taleefanka casriga ee soo socda ee Google.
Ka dib kaalay wararka dhabta ah: si fiican laba gacmood oo fiidiyow ah, taas oo aan ku aragno tiro badan wararka software ee moodooyinka cusub ee Big G (waxaan horeyba u ognahay naqshadaha si fiican): dejimaha waxaan ku aragnaa qayb u heellan mawduucyada (halka mawduuca mugdiga ah sidoo kale laga helo), suurtagalnimada in shaashadda lagu sii hayo inta aan daawanaynno isla markaana otomaatig cad ah dheelitirka ku saleysan waqtiga.
Fiidiyowga labaad, markaa, waxaan helnaa macluumaad dheeri ah: dhamaadka dhamaadka gacanta-ayaa la muujiyey muunado sawirro badan ee Pixel 4 XL iyo isbarbardhiggooda “hore” Pixel 3 XL. Horumarrada ayaa u muuqda kuwo aad u yar, laakiin weli waxaa jira waqti ka hor inta aysan ku dhufan suuqa.
THE dareemayaal tixraac ah laga soo qaaday fiidiyowga waa Sony IMX481 oo loogu talagalay telephoto, Sony IMX363 oo ah mudista caadiga ah iyo Sony IMX481 oo iskood ah. Kadibna waxaa jira OVM7251 IR sensor-ka loo yaqaan ‘Unlock Unlock’. Hilib aad u badan ayaa ku jira dabka, sidaa darteed waanu kaaga tagaynaa video hoose iyo muunado sawirro laga soo qaaday gacanta-labaad.
Tijaabada sawirka Pixel 4 iyo isbarbardhiga Pixel 3
Via: Maamulka Android, 9to5Google (1), Wax soo saareyaasha XDA, 9to5Google (2)